Barattoota qabxii olaanaa galmeeessaniif sagantaan beekkamtii laachuu gaggeeffame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Barattoota qabxii olaanaa galmeeessaniif sagantaan beekkamtii laachuu gaggeeffame
On May 12, 2021 231
Finfinnee, Caamsaa 4, 2013 (FBC) – Barattoota akka naannoo Oromiyaatti qabxii olaanaa galmeessaniif sagantaan beekamtii kennuu geggeeffameera.
Sagantaan beekamtii kennuu barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaa bara 2012 fudhatanii qabxii olaanaa galmeessisanii kun bakka preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniit magaalaa Adaamaa galmaa Abbaa Gadaatti geggeeffameera.
Sirni beekamtii kennuu kun akka oromiyaatti barattoota qabxii olaanaa galmeessisan 152 kan hirmaachisee yoo ta’u tokkoon tokkoo barattoota kanneeniif Birriin kumni 20’n bifa badhaasaan laatameera.
Dabalataanis barattoota 152 akka oromiyaatti qabxii olaanaa galmeessisaniin filaman kanneen keessaa barattoota dhiiraa 3 fi dubara 3 qabxii fooyya’aa galmeessaniif badhaasni addaa meedaliyaa fi taableetiin kennamuu himameera.
Gama biraatiin manneen barnootaa 3 akka naannoo Oromiyaatti barattoonni hedduun keessatti qabxii 600 ol-galmeessan badhaafamtoota kompitaaraa fi waancaa ta’aniiru.
Sirna barattootaaf beekamtii kennuu kanarratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Fiqaaduu Tasammaa dabalatee hoggantoonni hojii mootummaa naannoo Oromiyaa olaanoo,Abbootiin Gadaa,barattoonni fi qaamoleen biroo argamaniiru.
Barattoonni har’a akka naannoo Oromiyaatti qabxii galmeessaniin beekamtii argatan kunniin Preezdaant Shimalis Abdiisaa harka badhaasa isaanii fudhataniiru.
Iddoosaa Abdiitu gabaase.
Feesbuukii keenyan dabalata odeeffannoo waqtaawaa argachuuf; :-www.fanabc.com.
Magaalaa Goondaritti sagalee lakkaa’uun eegalame
Godina Arsii Lixaatti filannoon marsaa 6ffaan namoota sagalee laachuuf galmaa’an…
Godina Jimmaatti filannoo marsaa 6ffaa nagaan xumurame
Naannoo filannoo Baraak Alaltuutti namoonni kumni 91 ol sagalee laataan
Naannolee filannoo saanduqoonni cuquliisni waraqaa sagalee…
Dooktar Abiy filannoo marsaa 6ffaaf sagalee isaanii laatan
Dirree Dawaatti buufataaleen filannoon akka itti hin…
Adaamaatti namoonni dhuunfa adeemsa filannoo burjaajeessuf…
Godina Arsii Lixaatti filannoon marsaa 6ffaan namoota…
Prev	Next 1 of 2,491
Oduu biyya keessaa7473